SIDA LOO DIYAARIYO KHUDAAR XILLIGA JIILAALKA: LA QALAJIYEY OO LA QABOOJIYEY - BEERTA
Man cuno abrikot kumanaan sano. Miraha macaanku waxay leeyihiin tayada dhadhanka sare waxayna si deg deg ah u daali kartaa dareenka gaajada, jidhka ku kobciya fiitamiino iyo xubno muhiim ah, sidaa daraadeedna waxaa loogu talagalay isticmaalka dhowr cudur.
Margooyinku waxay leeyihiin waxyaabo kaloori hooseeya (100 garaam oo badeecada ka kooban 41 kcal oo keliya), taas oo u oggolaanaysa in ay cunaan kuwa isku dayaya inay qayb ka qaataan miisaan dheeraad ah.
Khudaarta macaanku waxay ka kooban tahay qadar fara badan oo dhirta faybar iyo beta-carotene, taas oo loo tixgeliyo antioksidan ugu xooggan oo ka hortagaya horumarinta unugyada kansarka iyo cudurada wadnaha.
Khudradda la qalajiyey: Khudaarta la qalajiyey, abrikotka la qalajiyey, kaisa - waa maxay faraqa
Khudaarta cagaaran, khudaarta cagaaran iyo kaadi - Kuwani waa dhammaan magacyada abadiyada qalalan, kaliya kaydi la qalajiyey - Kuwani waa qalalan khudaar cufan, oo laga helay lafaha; khudaar khudaar - dhan, midho qalalan leh dhagax; kaisa - qalajiyey khudaarta oo dhan, oo laga soo qaaday lafta.
Khudaarta cawska, khudaarta cagaaran, kaisa - Kuwani waa miro la qalajiyey, loogu talagalay diyaargarowga nooca khudaarta loo isticmaalo. Khudradda la qalajiyey waxay si buuxda u haysaa dhammaan nafaqooyinka iyo walxaha raadraaca.
Oo waxaa jira faracyo badan oo khudaar ah. Joogitaanka qayb ka mid ah abrikotka qadar badan oo bir ah iyo potassium waxay ka dhigtaa daaweyn caalami ah oo loogu talagalay daaweynta macluul yaraanta birta, cuduro badan oo wadnaha ah iyo xanuunada dhiigga ee keena la'aanta potassium.
Intaa waxaa dheer, waxay kicinayaan hababka dheefshiidka, waxay gacan ka geystaan ​​qulqulka xaako leh qufac aan fiicnayn, waxaa loo isticmaali karaa sida calool jilciye ama durayo.
Waxay yihiin kobcin kobcin xoog leh ee carruurta, sidoo kale waxay leedahay saameyn wanaagsan oo dib u soo celin ah, hagaajinta shaqada ee gallbladder, beerka iyo mindhicirrada.
Miro ayaa leh saameyn dhiira galin ah oo ku saabsan geedi socodka maskaxda, kaas oo gacan ka geysanaya hagaajinta xusuusta iyo hagaajinta waxqabadka maskaxda.
Sidee khudradda abadiyaalka ah ee loo isticmaalo
Khudaarta cawska ah - Tani waa dhadhanka ugu fiican uguna caafimaad leh dhammaan miraha la qalajiyey. Wuxuu ku booriyay jilicsanaanta midabka casaan iyo dhadhan macaan. Waa suurtogal in la qalajiyo abrikot oo leh ama lafo la'aan, laakiin way adag tahay in la sheego midda saddexda nooc ee abrikotka la qalajiyey waa mid caan ah.
Gaar ahaan faa'iido leh miro suni ah xilliga dayrta-guga. Qodobbada waxtarka leh ee khudaarta sababtoo ah waxa ka kooban kiimikada. Khudaarta cawska ah waxaa ku jira fitamiin A, nicotinic iyo asidior ascorbic, fitamiin B, magnesium, birta, cobalt, calcium, fosfooraska, manganese iyo naxaas.
Ma taqaanaa? 100 garaam oo khudradda la qalajiyey waxaa ku jira 5.2 g oo borotiinka, 51 g oo karbohidraat ah iyo 0.3 g oo dufan ah. Qeyb ka mid ah carbohydrate ee uurjiifka waxaa matalaya glucose iyo fructose, kuwaas oo awood u leh in si sahlan loogu soo riixo xiidmaha oo isla markaaba galaan dhiigga. Intaa waxaa dheer, midhaha qalalan waxay leedahay fiber, istaarijin, salicylic, citric iyo acid acids.
Awoodda bogsashada leh ee abrikotka la qalajiyey ayaa dhiirrigelisa qoto dheer. Waxaa lagu talinayaa in lagu cuno kuwa xanuunsanaya:
caloosha oo keenta xiidmaha.
Dad badan ayaa isticmaala khudaarta cawska ah sida beddelka sonkorta dabiiciga ah, taas oo sharxaysa caadada bariga ee qadiimiga ah ee cabbitaanka shaaha leh abrikotka la qalajiyey.
Daraasado casri ah ayaa xaqiijiyay in qaadashada nidaamsan ee mirahaasi ay ka caawiso hoos u dhigida heerka sonkorta dhiigga. Tani waxay ka dhigeysaa mid aan lagama maarmaan u ah kuwa qaba cudurka macaanka.
Waa muhiim! Waxaa si khaas ah faa'iido leh in la cuno miro qalaji ah kuwa kuwa waxyeellada ka soo gaarta qanjirka thyroidka.
Intaa waxaa dheer, khudaarta cagaaran waxay leeyihiin muuqaal ah anti-bactericidal, anti-bararka iyo saameynta boogta-bogsashada, taas oo u ogolaaneysa isticmaalka decoction ee miro nadiifinta nabarrada, ku luqluqo inta lagu jiro stomatitis iyo indhaha qaba conjunctivitis.
Noocyo khudaarta cagaaran ayaa ku haboon in lagu qalajiyo
Dhammaan noocyada khudaarta maahan mid ku habboon qalajinta. Markaad dooranayso miro, xasuuso in abrikot duurjoogta ah aysan ku habbooneyn ujeedadaas. Maanta, waxaa jira qiyaastii boqol nooc oo ku kala duwan dhadhanka, xajmiga carafka, cabbirka miro iyo muddooyinka bisil.
Xulashada waa in la siiyaa noocyada soo saara miro waaweyn, firfircoon iyo midho macaan. Markaad dooraneyso musharax, hubi inaad taxadar u yeelatid dhadhanka midhaha, maadaama ay aad u muhiim tahay in miraha aysan dhadhamin.
Haddii qalajinta abrikotka ee hawada loo doortay, ka dibna waxay joojiyaan noocyo goor dambe Bisaylkiisa dhexe ee xagaaga, tan iyo waqtigaan heerkulka hawadu waa sida in midhaha ay qalajin doonaan si fiican.
Waxa ugu muhiimsan - in aanay si shil ah u dhacin roobka.
Qallajinta abrikot waxay noo ogolaanaysaa inaan ku raaxaysanno miraha dhadhan fiican leh oo idil sanadka oo idil, oo keliya ma aha xagaaga. Iyagoo u diyaarinayna jiilaalka, waxaanu nafteena siinaa fursad ay ku isticmaalaan samaynta macmacaanka, cayayaanka miraha iyo cabitaannada la kariyey.
Miro-goynta waxaa loo sameeyaa siyaabo badan. Waxa ugu muhiimsan waa in si sax ah loo fuliyo habka si loo ilaaliyo dhammaan sifooyinka wanaagsan ee miraha, iyo sidoo kale dhadhankiisa, midabka iyo ariga.
Si aad u qallajisid abrikotka leh ama aan lahayn lafta waa arrin shakhsiyeed. Laakiin ha iloobin in dhagaxa ay aad u sahlan tahay in laga soo saaro miro cusub intii la qalajiyey.
Ma taqaanaa? Si aad u ilaaliso midabka quruxda badan ee abrikot, waxaad u baahan tahay inaad iyaga ku ridaan mudo ah biyaha, taas oo horay ku daray liin macaan. Ka dib markaad hesho midhaha biyaha, waa in loo oggolaadaa inay si wanaagsan u qalajiso.
Waxaa jira fursado badan oo lagu qalajiyo miraha, mid kastoo uu leeyahay faa'iido iyo faa'iido gaar ah.
Khudaarta waa la qalajin karaa hawada furan. Habkani waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya in lagu qalajiyo miraha noocyada kala duwan ee u bislaadaan bartamaha xagaaga, sida berry oo laga helay noocyada hore ee Bisaylkiisa inta u dhaxaysa muddadaas marka heerkulbeeggu uusan ahayn mid sare, oo sidaas awgeed waxaa jiri kara waxyeello dalagga leh caaryar.
Qalabaynta qoyan ayaa si gaar ah caan u ah beerta. foornadataas oo bixisa mulkiilaha beerta leh xornimo dhamaystiran oo ka timaada jawiga iyo dabeecadda dabeecadda. Qalabaynta qoyan sidoo kale waa mid aad u habboon. ee qalabka korontada ama iyaga dhaxan.
Ku qalajinta abrikot qorraxda
Wixii qallajin ah khudaarta qorraxda ayaa la doortaa mid cusub, ma ahan miraha ka baxsan oo aan lahayn waxyeelo. Miraha si taxadar leh ayaa loo dhaqaa loona soo saaraa lafaha.
Waa muhiim! Si loo ilaaliyo midabka midhaha, waxay ku qoyaan 10 daqiiqo xal of aaska, diyaarisay litir oo biyo ah, 8 qaado oo ah aaladda.
Waxaan midhaha u rogaa suunka iyo u daadi. Ka dib markii biyaha la miiray, waxaan ku faafinnaa abrikotka lakabka hal mar ah ee jeexaya korantada si ay halbeegtu u taabtaan midba midka kale.
Waxaan soo saarnaa midhaha qorraxda kulul ka dibna u dhaaf 3 ama xitaa 4 maalmood. Ka dib markii wakhtigaas la soo dhaafay, ka dhig sanduuqa oo ku rid midhaha lakabka kale ee cufan, ka dibna ka bax iyaga hooska ilaa ay gebi ahaan qalalan yihiin.
Ku qalajinta abrikotka foornada
Qaabkan, dooro khudaarta si waafaqsan shuruudaha la mid ah sida qallajinta qorraxda. Waxaan ka soo baxnaa midho dhagax ah, waxaan ku ridnaa xabbad.
Marxaladda soo socota, waxaan ku darnaa khudradda 10 daqiiqo karkarinta karkarinta (ku dar 1.5 dubish oo ah baking soda 1 litir oo biyo ah). Ka dib markii biyo karkariya, isla markiiba ku daa miro dhowr ilbiriqsi biyo qabow.
Waxaan siinaa iyaga si aan u daadinno. Ka dibna midhaha ku rid cutubka dubista, gooyaa si aysan u taaban midba midka kale, oo ku rid foornada.
Ma taqaanaa? Khudaarta ayaa la qalajiyey ilaa 8 saacadood heerkulkoodu yahay ilaa 65 digrii, albaabka foornadu waa inuu noqdaa mid dardar leh. Dhamaadka qallajinta, heerkulka foornada waxaa lagu dhimi 40 darajo.
Ka dib markii la qalajiyo, waxaan miro ku ridnaa weel alwaax ah oo ku qarin muddo 3-4 toddobaad ah meel mugdi ah, si fiican u hawo si aad u xasiliso qoyaanka.
Ku qalajinta abrikot si aan caadi ahayn qorraxda iyo foornada
Hab kale oo caan ah oo la goynayo abrikotka la qalajiyey xilliga qaboobaha waa qalajinta wadajirka ah ee miraha foornada iyo qorraxda. Marka hore, miraha waxaa lagu qooyay 10 daqiiqo xal of a sitit acid, ka dibna la qalajiyey, la dhigay on sabtida iyo dhigay on waddada.
Afar saacadood ka dib, waxaa la geliyaa qolka oo la qalajiyey afar saacadood oo kale foorno oo ku saabsan 60 digrii.
Ku qalajinta abrikotka qalabka korontada
Bislaaday, laakiin aan miraha ka jarin waa la dhaqaa, lafahooda waa la saaraa. Ka dibna waxaan kudajinnaa midhaha mashiinka korontada adigoo jaraya si aanad u taaban midba midka kale.
Qalaji aaladda si fiican u qalaji oo u leexo qalabka heerkulka celceliska. Nidaamka qalajinta wuxuu soconayaa 10 ilaa 14 saacadood waxayna kuxirantahay cabbirka iyo casiirka ee miro.
Sida loo kaydiyo abrikotka la qalajiyey
Waa muhiim in aan si haboon u qalajin kaliya, laakiin sidoo kale si habboon u keydso miraha qalalan ee abrikotka.
Waa muhiim! Si aad uhesho miraha la qalajiyey muddada ugu dheer ee suurtagalka ah, waxay u baahan doonaan in lagu duubo bacda faashad oo lagu daboolo qol qabow oo si fiican u hawo leh heerkulka ugu hooseeya qoyaanka iyo heerkulka hawada oon ka badnayn 10 digrii.
Haddii aysan suurtogal ahayn, ka dibna khudradda la qalajiyey waa in lagu kaydiyaa bacaha warqadaha ama dhalooyinka, barxadaha si adag u xiran, kuwaas oo mararka qaarkood u baahan in la furo wakhti gaaban oo loogu talagalay hawada.
Sidee loo sameeyaa khudaar shinni leh
Khudaar cagaaran oo la kariyey waa sahlan tahay. Si arrintan loo sameeyo, dooro wax yar oo aan weli qaan gaadhin, miraha adag ee adag, ku dhaq iyaga biyo hoose oo ha u daadin.
Hadda waa inaad ka saartaa lafaha iyaga ka mid ah iyo miro yar yar oo biyo ah karkaraya. Isku day midhaha dhowr daqiiqo biyo qabow, kadibna kaliya markaa waxaan ku qoynaynaa abrikotka sharoobada, la kariyey 250 gram oo biyo ah 1.3 kg oo sonkor ah.
Miraha waa in la kariyaa sharoobada saddex jeer shan daqiiqo. Ka dib markaad karisid ka dib, u ogolow midhihiisa si fiican u qabow. Ka dib karinta ugu dambaysa, isku laab midhaha cufan iyo u daadi.
Ku dar miro cad oo la dubayo oo ku qallaji foornada ilaa 40 darajo illaa ay ku daboolaan kerosubka sonkorta.
Sida loo xakameynayo abrikotka xilliga jiilaalka
Hooyooyinka intooda badani waxay u gurtaan xawaashka jiilaalka, dhirta, raspberries, iyo sidoo kale noocyo kale oo berry ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay si joogto ah u dhaafaan dareenka ay ku jiraan abrikot. Iyo waxtarla'aan!
Tani waa miro aad u fiican oo caafimaad leh, kaas oo ku jira xaddi badan oo fiitamiin iyo macdan.
Waa muhiim! Khudaarta ayaa badanaa la goostay jiilaalka qaabka macaanka, ama wax lagu qallajiyo, laakiin isla markaa waxay illoobaan in lagu keydsho abrikotku kuu ogolaanayo inaad haysato dhamaan sifooyinka faa'iido leh ee miro-gaaban.
Xakamaynta abrikot waa la fulin karaa, gebi ahaan, halbowlaha, sonkorta ama sharoobada sonkorta. Mid kasta oo ka mid ah hababkani waa mid u fiican qaabkeeda. Laakiin si aad u dooran karto naftaada habka ugu haboon, bal aynu eegno mid kasta oo ka mid ah.
Khudaarta oo dhan la kariyay
Haddii aysan jirin wakhti ama rabitaan ah in la jibbaaro ka saarista lafaha, markaa khudaarta ayaa si buuxda u barafeysan kara.
Waa muhiim! Si loo qaboojiyo dhammaantiis dooran kalluun, abrikot oo dhan, si fiican u dhaq iyaga kuna qalaji.
Ku rid miro hal lakab oo ku yaal saxaarada, saldhigga kaas oo ku daboolan caag balaastik ah, oo ku rid barafeeyaha illaa inta ay adag tahay. Ka dib marka midhaha oo dhan ay si fiican u barafoobaan, waxaan ku xirnaa bacaha balaastikada ah oo loogu talagalay kaydinta dheeraadka ah.
Qodobka ugu muhiimsan ee habkani waa in miraha ay qaadaan meelo badan.
Khamriga Frost Halves
Miraha si fiican ayaa loo dhaqay, la qalajiyey oo laga saaray lafaha, ka dibna ku rid saxaarad ku duudduuban caag ah hal lakabka. Ka dib markii abaartu ay adag tahay, ku rid baakooyinka si aad u sii kaydiso.
Khudaar barafaysan oo sonkor leh
Marxaladda koowaad ee barafka macaan ee sonkorta leh ma ahan mid ka duwan labadii hore. Waxaan dooran karnaa miraha, iyaga dhaq, si taxadar leh u qalal iyo ka saar lafaha.
Waxaan ku dhajino khudaar ku jira weel balaastik ah lana rusheeyaa lakab kasta oo sonkor ah. Waxaan ka tagnaa weelasha miiska ka hor inta aysan juuska ka muuqan iyaga. Dabadeedna xiro weelka daboolka leh kuna rid qaboojiyaha.
Ka jar khudaarta khudaarta
Ku dhaq mishiinka iyo ka saar lafaha, ku rid midhaha ku jira weel oo buuxi qabow sharoobada, lagu diyaariyey heerka 2 koob oo biyo ah 1 koob oo sonkor ah. Ku dabool weelka daboolka daboolka oo u dir qaboojiyaha.
Waa sahlan tahay in lagu diyaariyo miraha macaan ee macaan ee jiilaalka, laakiin waa wax aad u fiican in ay ku dhajiso xannuunka ugu xoogan Janaayo, daawashada barafka qabowga qabow ee ka baxsan daaqada qoob-ka-ciyaarka.
Khamrigu waa mid casiir leh, midho fiican leh, midab leh, oo ah qorax qorrax leh oo na siinaya hadiyad. Khudaar kastaa waa qayb yar oo qorrax ah oo naga badbaadin karta cuduro kala duwan, waxay siiyaan difaac adag iyo si hufan oo awood leh.
Mana aha wax walba oo lagama maarmaan u ah inay sugaan xagaaga soo socda si ay u tijaabiyaan khudaar: waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida si habboon loo qalajiyo ama barafka loogu yareeyo guriga.